> Resource > Video > Movie G Kids: Bar Kids in ay Sameeyaan Movie
Iyada oo sii kordhaya software gaare movie ee lagu iibiyo suuqa, waa sahlan yahay sidii hore si aad u bilowdo adduunka ee video tafatirka. Si kastaba ha ahaatee, waxaad weli laga yaabaa inay ku adag tahay si aad u hesho a gaare movie habboon ee carruurtaada. Haddii tani ay tahay kiiska, isku day gaare ah anfacaya movie caruurta halkan: Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) ( Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) ). Waxaa qoreysa ah si sahlan loo tarjumo interface iyo jiididda dhamaystiran iyo hoos u taageero, iyo caruurta aad ku faraxsan yahay in la abuuro filim xiiso leh iyadoo la isticmaalayo ay ku adkeyd inay u gaar ah iyo hal-abuur doonaa. Waa maxay dheeraad ah, codsigan kaloo ka caawisaa caruurta aad qaar ka mid ah ay bartaan waxyaabaha asaasiga ah ee video tafatirka, si ay u boodi karaan barnaamijyadooda ka adag si fudud mustaqbalka.
Barnaamijkan waxa cross-madal, download software saxda ah ee nidaamka hawl gal, ka dibna waxa loo soo dajiyo on your computer. Hagaha soo socda diirada saarayaa version daaqadaha. Waxaa Fiiri hadda.
Fiiro gaar ah: Tilmaan-bixiyahan waxa ku qaadataa Screenshot Windows, laakiin version Mac dhawaad ​​shaqeeyaa isku.
1 Import video by jiitaa-n-dhibic
Editor ayaa video caruurta waxay bixisaa hab quruxsan fudud oo degdeg badan si ay u dajiyaan aad videos: fudud jiitaa-n-dhibic, inkastoo ay sidoo kale taageertaa siyaabo kale sida gujinaya "Import" ama "Add Files" xitaa folder faylka.
Marka dhammaan faylasha keeno, ay muujin doonaa sida thumbnails in ay leeg- bidix. Haa, thumbnails halkii aragtida liiska, si caruurta aad si deg deg ah ka heli kartaa video ay doonayaan halkii akhriska horyaal adag.
2 Edit video isticmaalaya guddi Timeline iyo tafatirka ah
Si ka duwan barnaamijyada kale ee aan toosan video tafatirka, taas oo ka dhigi video sixiddiisa shaqada lagu caajiso iyo waqti lumis, video gaare tan caruurta qoreysa aad u dareen waqtiga video tafatirka iyo dhinac-ilaa-dhinac previewing uu furmo suuqa. Sidaas in caruurta aad si fudud isha ku hayn karaan waxa ay ka dhigeysa, iyo waxa ay arkaan waa waxa ay u hesho.
Mar kale, in guddi tafatir ah, ma laga yaabaa inuu u fududahay in ay sameeyaan itusi video sida qoqobada, flipping, lana siii, beddelo mugga, qabsado dhalaalka, iwm sababtoo ah waxa ay ku lug leedahay oo kaliya click mouse ama hawlgal jiitaa-iyo-hoos u fudud.
Software video tafatirka caruurta xitaa siisaa gacan-ku-marto si loo caawiyo abuuro midabo iyo madadaalo movie guriga. Si aad u codsato saameyn muuqaal ah, fudud soo qaado il fiican in tab saamaynta, iyo jiididda in clip la doonayo.
3 naadiya video online
Marka abuurka video ka baxayo, caruurta aad riixi kartaa "Abuur" in wax soo saarka video ah oo siyaabo kala duwan. Gashan YouTube si aad ula wadaagto dadka kale waa fursad fiican oo lagu gaari karo si toos ah uga soo barnaamijkan. Haddii carruurtaada doonayaan in ay u ciyaaro qalabka la qaadi karo sida iPad, barnaamijkan badbaadiyay kaaftoomi ee configuring wax soo saarka qalabka aad by si toos ah bixinaya qaab ay horena. Waxaa xitaa u ogolaanaya in ay gubi DVD video ah daqiiqo si ay u ciyaaro ciyaaryahan DVD standalone ama TV.
Taasi oo dhan sida si ay u abuuraan filim cabsi isticmaalaya video gaare tan caruurta. Ma sugi karaa in ay isku dayaan naftaada? Download tijaabo ah oo lacag la'aan ah ka hooseeya hadda.
Software talinayaa in Beddelaan File MKV An
Professional oo si sahlan loo isticmaali Video Edit Magic u Mac